Arsenal Oo Lambar Cusub Siiyay Gabriel Martinelli & Xiddigii Lambarka Looga Qaaday Oo Si La Yaab Leh U Hadlay - Laacib
HomeWararka CiyaarahaArsenal Oo Lambar Cusub Siiyay Gabriel Martinelli & Xiddigii Lambarka Looga Qaaday Oo Si La Yaab Leh U Hadlay
Arsenal Oo Lambar Cusub Siiyay Gabriel Martinelli & Xiddigii Lambarka Looga Qaaday Oo Si La Yaab Leh U Hadlay
May 19, 2022 Saed Mohamed
Lucas Torreira ayaa jawaab ka bixiyay in Arsenal ay ka qaaday lambarkiisii islamarkaana lagu wareejiyay weeraryahan Gabriel Martinelli.
Kooxda Waqooyiga London ka dhisan oo soo bandhigtay maaliyadeeda cusub ee xilli ciyaareedka danbe oo ay ku ciyaari doonaan kulanka Axada ee Everton ayaa sidoo kale shaacisay in Martinelli uu lambar cusub u xiran doono kooxda.
Xiddiga reer Brazil ayaa laga bedelay lambarkii 35 ee uu u xirnaa kooxda iyadoo la siiyay maaliyada No.11 taasoo soo jeedineysa in laacibkaan uu boos joogta ah ka heysanayo kooxda.
Balse dhibaatadu waxay tahay in maaliyada No.11 uu iska lahaa Martinelli saaxiibkiisa Torreira. Xiddiga khadka dhexe ayaa soo gabagabeynaya amaah hal xilli ciyaareed uu ku joogay Fiorentina halkaasoo uu u saftay 34 kulan isagoo dhaliyay shan gool.
Xiddiga reer Uruguay waxaa Arsenal u soo saxiixay Unai Emery xagaagii 2018 isagoo kooxda koowaad u dheelaya 89 kulan labadiisii xilli ciyaareed ee ugu horeysay ka hor inta uusan booskiisa waayin markii uu Arteta tababare u noqday kooxda. Waxaa amaah loogu diray Atletico Madrid xilli ciyaareedkii hore halka uu xilli ciyaareedkan amaah ugu dheelay Fiorentina.
Torreira ayaa xirnaa maaliyada No.11 intii uu joogay Arsenal, wuxuuna sheegay in kooxda aysan kala tashanin in lambarkiisa lagu wareejiyo Martinelli. Arsenal oo lambarka cusub ee Martinelli ku shaacisay baraha bulshada ayuu Torreira u qoray jawaabtaan:
“Lambarkee ayaa xiran doonaa sannadka soo socda? Nasiib wacan saaxiibkeey Gabriel Martinelli, waan ku jeclahay.”
Xaqiiqda ah inaysan Arsenal kala tashanin Torreira inay lambarkiisa siinayaan Martinelli ayaa cadeyneysa in xiddiga reer Uruguay uusan mustaqbal ku laheyn Arsenal isagoo ka mid noqon kara xiddigaha ay kooxda iska direyso xagaagan.
RASMI: Wayne Rooney Oo Is Casilay & War Rasmi Ah Uu Soo Saaray
Jesus, Rafinha, Martinez - Arsenal Oo Isku Adkeyneysa Si Aan Hore Loo Arag
Maxaa Ka Soo Cusboonaaday Xiddiga Man United Mason Greenwood Ee Kufsiga Loo Heysto?